नेताहरू नहुने हो भने देशमा के होला ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः भाद्र २७, २०७४ - साप्ताहिक
नेताहरू नहुने हो भने देशमा के होला ?
अहिलेका हास्यकलाकारहरू बेरोजगार हुन्थे ।
- अनिश अधिकारी
देश विकास हुन्छ । हामीले सयौंको संख्यामा सांसद, पचासौं मन्त्री आदिलाई पाल्नु पर्दैन । त्यो पैसा देश विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो ।
- कुमार पुन
नेताहरू देशका भाइरस हुन् जसले देश र जनतालाई मर्माहत तुल्याउँदै छन् । यति सानो देशमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल, तैपनि लाज–सरम छैन, यी गफाडी नेताहरूको काम छैन ।
- राज गोर्खाली
बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्, हामी गोर्खाली हौं भन्ने कुरामा गर्व गरेर बस्थ्यौं होला ।
- केशव पौडेल
राजनीतिबिना देश चल्दैन । देश हाँक्न सधैं सबल नेतृत्व चाहिन्छ । नेताबिना देशले उचित मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । हुन सक्छ, अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ, तर नेता भएनन् भने देशले गति लिन सक्दैन ।
- पल हिरा
देश विकासले गति लिने थियो । किनभने नेताले कुर्सी तानातान गर्ने समय विकासमा लगानी हुन्थ्यो ।
कस्तो प्रश्न गरेको ? नेता त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् । घरमा, काममा, व्यवसायमा अनि देशमा पनि । हरेक क्षेत्रमा यसको आवश्यकता छ । नेता नै व्यवस्थापक हो । नेता प्रगतिशील हुन्छ, उनले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, चुनौतीहरूको सामना गर्दै बाटो देखाउँछ । नेतृत्वबिना कुनै घर–परिवार त व्यवस्थापन हुँदैन, देशको के कुरा भो र ? भलै हाम्रो देशमा कुसल नेता नहोलान् ।
- प्रकाश शर्मा
शान्ति, अमनचयन, मेलमिलाप, विकास तथा समृद्धि हासिल होला ।
- प्रल्हाद खनाल
फेरि जनतालाई कसले मनोरञ्जन दिने नि ?
मज्जा नै हुँदैन नि अनि ढुङ्गा र टायरको त कामै भएन नि ।
- मोक्तान बुद्ध
फेरि एउटा जङ्गबहादुर जन्मिन्छ ।
- विशाल पाण्डे
नेता नभए राजा हुन्थे होलान् ।
- सुदिप तामाङ, कपिल पाण्डे
विकास हुन्छ ।
- रमेश न्यौपाने
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त सोच्नै कठिन होला, तर सोच्ने बेलाचाहिँ भयो जस्तो लाग्छ ।
- हरिहर जोशी
नेपालमा नेताहरू नहुने हो भने सुख–शान्ति मिल्थ्यो होला ।
- आदिम सुब्बा
देश सुन्दर र शान्त हुन्छ ।
- सुलोचना परियार
बाउ–आमा नभएको घर कस्तो होला ? त्यसरी नै बुझौं न ।
- सुवास लुइँटेल
विकास, समृद्धि, शान्ति, सुख र खुसी प्राप्त होला ।
- सन्जीव मरासिनी
जे होला–होला, त्यसरी नै टर्ला ।
- नारायण कोइराला
देशमा सैनिक शासन लागू हुन्छ ।
शान्ति हुन्थ्यो, राम्रै हुन्थ्यो ।
- अदिप खड्का
देश विकासले रफ्तार पक्रन्थ्यो ।
- राम क्षेत्री, आभास मैनाली
स्वर्ग नै हुन्थ्यो होला नि !
- बिना लोहाला
राज्यकोषमा वृद्धि हुन्थ्यो ।
- अनरुज थापा
देश सिंगापुर हुन्थ्यो होला ।
- जय शम्भो
आपसमा द्वन्द्व हुँदैनथ्यो, मेलमिलाप हुन्थ्यो ।
- सन्तोष चाम्लिङ
म राजा बन्थें ।
एयरपोर्ट आउँदाको नमीठो अनुभव के छ ? भाद्र ५, २०७५
नेपालमा नेता बढी भ्रष्टाचारी छन् कि कर्मचारी ? श्रावण २८, २०७५